Tag: menu galitaanka wordpress | Martech Zone
Tag: menu galitaanka wordpress
Weligaa ma rabtay inaad wax ka beddesho bog ama ku dhejiso WordPress oo aad ka careysnayd inaadan awoodin inaad raadiso oo aad hesho boostada? Ka waran kaliya awooda inaad ku darto qoraal cusub si fudud? Sidee ku saabsan kaliya karti u helida bogga galitaanka si fudud? DK New MediaHorumar sameeyaha cajiibka ah, Stephen Coley, ayaa ugu dambayntii bixiyay jawaabta qofkasta oo adeegsada WordPress uu doonayo… Teleport. Teleport waa liis yar oo xun oo aad u xun